I-Working Capital - Abenzi besigidi
Sinethiwekhi eqinile nokuxhumana nezikhungo zezezimali ngezidingo zakho zezimali zemishini! Ngokungafani nenkampani ejwayelekile yokusebenzela i-Working Capital, abalingani bethu ebhizinisini banezinhlelo zokuqalisa futhi basungula amabhizinisi anesikweletu esihle. Imvamisa, izinkampani ezisebenza ngezimali ze-Working Capital zidinga ubuncane bezinyanga eziyisithupha ebhizinisini ukuze kubhekwe ukuthi abaqokiwe bakulungele yini ukufaka uxhaso lwezimali kodwa ngokuhlangana kwethu lokhu kungaxoxiswana ngakho. Inkampani esebenza kahle yezezimali i-Working Capital ngeke ikugcine ulindile, bazothola ithuba lokusiza izidingo zakho zezezimali ngokushesha okukhulu!
Ama-Akhawunti Atholakalayo Ezimali
Kufika ku-80% yenani lobuso elifanelekileko le-Inventory ye-AR
50% kuya ku-70% wenani elilinganiselwayo lokwehliswa kwempahla
50% kuya ku-70% wenani lokumiswa kwemishini
Ukuthengwa Kwemali Ye-oda
Ukuqalwa Kwemininingwane Okutholwayo
Intuthuko Yekhomishini Yezindlu
Ukushayela Iloli kanye Nezinto Ezithwala Impahla
Imali Yezentengiso Yezentengiselwano
Izimali Zokunikezela Nentengiso - Khulisa ukuhamba Cash futhi Kwenze capital Working yeNet
Sinikezela ngobuchwepheshe kanye nohla olubanzi lwezinsizakalo zezimali zokuhlinzekwa kwezinsiza ukusiza abathengi nabathengisi ukubhekana nezimali zabo ezisebenzayo nezidingo zokulawulwa kwengozi.
Uhlelo lwethu lwezezimali oluhlinzeka ngezinsizakalo lufaka izisombululo ezihlelekile ezakhelwe ukuqinisa amaketanga wokuhlinzekwa komhlaba kanye nokuvikela izindlu ngokuvikela imali esebenza futhi kuvunyelwe ukuhweba ngezimali ngenani eliphansi.